Ra’iisul Wasaare Khayre Oo Soo Xiray Shirka Madasha Iskaashiga Soomaaliya
Sagal Radio Services • News Report • October 2, 2019
Ra’iisul Wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa soo xiray shirka madasha iskaashiga Soomaaliya oo ay goob joog ka ahaayeen wakiillada beesha caalamka, wakiillo ka socda hey’ado caalami ah iyo in ka badan 50 dowladood.
James Swan oo ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka Dowlada iyo Jubbaland
Wakiilka Xoghayaha gaarka ah ee Qaramada Midoobey u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Ambassador James Swan oo khudbad ka jeediyay maanta Shirka Caalamiga ee Madasha Iskaashiga Soomaaliya ayaa ku baaqay in wadahadal lagu dhameeyo khilaafka ka dhexeeya Dowlada Federalka iyo Maamul Goboleedka Jubbaland.
Maxkamadda ciidamada oo xukun dil ah riday
Cumar Cabduqaadir Shiikh Nuur Xusseen ayaa loo heystaa dillka Allaha Unaxariiste Ex. Dalbe Boliis Jamaal Abuukar Jiinow oo uu ku dilay degmada Waabari 22-kii March ee Sanadkan kadib markii uu ka hor istaagay dhac uu u geysanayay mid kamid ah rayidka ku dhaqan degmada Waabari.
Madaxweyne Deni ‘’ Waxaan diyaar u nahay in aan wadahadalno Dowladda Federaalka
Madaxweynaha dowlad gobolleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa sheegay in Puntland mar walba diyaar u tahay sida uu hadalka u dhigay wadahadal ay la gasho dowladda Soomaaliya, isaga oo mar kale ku celiyay in aysan qeyb ka aheyn wixii ka soo baxa shirka Iskaashiga Soomaaliya ee ka soconaya Muqdisho.
Sarkaal ka tirsan Ciidanka DANAB oo ku geeriyooday qarax miino iyo Al-Shabaab oo sheegatay
Sagal Radio Services • News Report • October 3, 2019
Sarkaal caan ahaa oo ka tirsanaa Ciidanka Kumaandooska Soomaaliya ee DANAB ayaa shalay ku geeriyooday qarax miino oo ka dhacay duleedka Muqdisho.
Madaxweynaha Puntland oo shir degdeg ah isugu yeeray Golihiisa Wasiirada
Madaxweynaha Puntland Saciid C/llaahi Deni oo maalmihii la soo dhaafay ku sugnaa magaalada Boosaaso ayaa shir degdeg ah isugu yeeray Golihiisa Wasiirada, iyadoo la filayo in laga soo saaro go’aano culus.
Axmed Madoobe “Hannaanka siyaasada loo dhan yahay dalka kama jirto, wixii ka soo baxay Shirkii…”
Madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe ayaa sheegay in hannaanka siyaasadda loo dhan yahay aanay dalka ka jirin, isagoo caddeeyay in wixii ka soo baxa Shirkii shalay lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho aanay anfaceynin dadka Soomaaliyeed.
Akhriso/Daawo: War-murtiyeedka Shirka Iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya Oo Dhameystiran
Sagal Radio Services • News Report/Video • October 3, 2019
Waxaa goordhow la soo saaray war-murtiyeedka shirka Iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya kaas oo muddo 2 maalin ah ka soconayey magaalada Muqdisho iyada oo la xusay in waxyaabo badan la qaban lahaa haddii aaney isku dhici laheyn dowladda federaalka ah iyo dowlad goboleedyada.
Daahir Geelle oo talo cajiib ah siiyay Madaxweyne Farmaajo [Madaxweyne waxaa haray Muddadii aad dhaxalka…]
Sagal Radio Services • News Report • October 4, 2019
Wasiirkii hore ee Warfaafinta Soomaaliya Sheekh Daahir Maxamuud Geelle oo maanta ka qeyb galay Barnaamij Dood ah oo lagu falanqeynayay xaaladaha siyaasadeed ee dalka ayaa si aad ah u dhaliilay qaabka ay wax u wado dowladdii uu ka tirsanaa ee uu iska casilay bishii May ee sanadkan.
Dowlada Soomaaliya oo markale diiday in dib loo dhigo dhagaysiga dacwada badda
Dowladda Soomaaliya ayaa ku dhowaaqday in ay diidan tahay in mar kale dib loo dhigo dhageysiga kiiska dacwadda badda ee horyaala maxkamadda caalamiga ah ee ICJ.